Magacyada & Tirada Dadka La Laayey – Puntland Maxaa Haldoor La Dilay, Gacan Ku Dhiiglayaashiise Cadaaladda Mala Horkeenay? – Radio Daljir
Magacyada & Tirada Dadka La Laayey – Puntland Maxaa Haldoor La Dilay, Gacan Ku Dhiiglayaashiise Cadaaladda Mala Horkeenay?
Juunyo 21, 2011 12:00 b 0
1. Nabadoon Nuur Xirsi Cismaan(Nuur Waal) : Wuxuu kamid ahaa nabadoonadda gobolka mudug oo inta badan ka hadli jiray howlaha ammaanka gobolka, sidoo kale nabadoonku waxuu la shaqayn jiray Hay’adda PDRC qaybteeda gaalkacyo oo uu ka qayb qaadan jiray inta badan barnaamijyadda nabadda, nabadoon nuur waxaa la dilay bishii march 30 2011, balse dhaawac halis ah oo soogaaray ayuu u geeriyooday 48 saac kadib, dilkiisana waxaa gaystay kooxo afka soo duubtay.
2. Nabadoon Saalax Cabdisalaan Axmed (Faqash) : Wuxuu kamid ahaa nabadoonadda gobolka Bari si aad ahna uga hadli jira howlaha nabadgalyadda gobolka, nabadoon saalax waxaa la dilay bishii Aprill 7 2011, waxaana lagu dilay magaaladda bosaaso xili uu nabadoonku kasoo baxay salaadii makhrib ee uu ku tukaday masjidka Al-Raxma .
3. Nabadoon Siciid Xasan Cumar (Kashwiito) : Wuxuu kamid ahaa nabadoonadda gobolka bari kuwooda aadka u firfircoon had iyo jeerna ka hadli jiray ammaanka, nabadoon siciid waxaa la dilay bishii Aprill 24 2011 waxaana lagu dilay magaaladda bosaaso xili uu kasoo baxay salaada cishaha oo uu ku tukaday masjidka Al-Rashiid.
4. Nabadoon Xuseen Cali Dudde : Wuxuu ahaa Gudoomiyihii Gudigga Nabad Galyadda gobolka Mudug , sidoo kale wuxuu kamid ahaa nabadoonadda gobolka mudug had iyo jeerna ka shaqayn jiray howlaha ammaanka gobolka, waxaana la dilay bishii March 21 2011 waxaana lagu dilay magaaladda gaalkacyo.
5. Oday Warsame Yusuf Islaam (Cirfe) : Wuxuu kamid ahaa Odayaasha Gobolka Mudug, waxaana la dilay bishii January 3 2011 waxaana lagu dilay magaaladda Gaalkacyo.
6. Nabadoon Axmed Salaad Caynab : Wuxuu kamid ahaa nabadoonadda gobolka bari, waxaana la dilay bishii March 28 2011 waxaana lagu dilay magaaladda bosaaso.
7. Gudoomiye Shiikh Maxamed Cabdi (Awaare) : Wuxuu ahaa Gudoomiyihii Maxkamadda Darajadda 1aad ee Gobolka Bari In kabadan 20 sano, wuxuuna ahaa xaakim leh khibrad fog iyo xeel durugsan dilkiisuna wuxuu wiiqay hanaankii Garsoorayaasha maadaama uu ahaa shakhsi leh khibrad dheer, Gudoomiye Awaare waxaa la dilay bishii November 11 2009 waxaana lagu dilay magaaladda bosaaso xili uu kasoo baxay salaada makhrib dilkiisana waxaa gaystay koox afka soo duubatay.
8. Gudoomiye Shiikh Xuseen Maxamed Khaliif : Wuxuu ahaa Gudoomiyihii Maxkamadda Rafcaanka ee Gobolka Mudug, iyo waliba culimadda si weyn looga yaqaano magaaladda oo dhan, waxaana la dilay bishii Feb 8 2011, waxaana lagu dilay magaaladda gaalkacyo.
9. Xeer i laaliye Cabdiqaadir Jaamac Nugaal (Caato) : Wuxuu ahaa Xeer i laaliyaha guud ee gobolka mudug waxaana la dilay bishii January 25 2011 waxaana lagu dilay magaaladda gaalkacyo xili uu kasoo baxay salaadii cishaha, dilkiisana waxaa gaystay kooxo afka soo duubtay.
10. Xeer i laaliye Maxamuud Aw Muuse Gelle (Tima Jilic) : Wuxuu ahaa Xeer i laaliyaha guud ee gobolka mudug, waxaana la dilay bishii June 7 2011 waxaana lagu dilay magaaladda gaalkacyo, dilkiisana waxaa gaystay kooxo afka soo duubtay.
11. Sarkaal Mukhtaar Shiikh Cali (Jifi-Jabsadde) : Wuxuu ahaa Sargaal ka Howl gali jiray Safaaradda Ethiopia ay kuleedahay caasimadda puntland ee garoowe, horayna wuxuu mar usoo noqday Gudoomiya Degmadda Gallaadi ee Ismaamulka Soomaalidda Ethiopia ee Kilillka Shanaad, waxaana la dilay bishii Aprill 22 2011, waxaana lagu dilay magaaladda Gaalkacyo.
12. Agaasime Maxamed Yaasin Ciise (Ilkacase) : Wuxuu ahaa Agaasimihii Maamulka iyo Dhaqaalaha Hay’adda PDRC , waxaana la dilay bishii April 6 2011, Waxaana lagu dilay magaaladda garoowe dilkiisana waxaa gaystay kooxo ah dablay hubaysan.
13. Agaasime Shiikh Ismaaciil Xaashi Xuseen : Wuxuu ahaa Agaasimihii Wasaaradda Diinta Iyo Awqaafta Puntland, sidoo kale wuxuu kamid ahaa culimadda waa weyn ee gobolka mudug, waxaana la dilay bishii April 16 2011 waxaana lagu dilay magaaladda gaalkacyo, dilkiisana waxaa loo adeegsaday miino loo dhigay gaarigii uu saarnaa Agaasimihu kadibna wuu u geeriyooday.
14. Taliye G/sare Axmed Xaaji Doon (Tiibo-Tiibo) : Wuxuu kamid ahaa Saraakiisha Sare ee Ciidamadda Daraawiishta Puntland, wuxuuna mar soo ahaa Taliya Ciidamadda Daraawiishta Gobolka Nugaal, waxaana la dilay bishii June 13 2011 waxaana lagu dilay magaaladda bosaaso.
15. Ganacsadde Shire Siciid Cabdiraxmaan (Walbaq) : Wuxuu kamid ahaa ganacsatadda waa weyn ee gobolka bari, sidoo kale wuxuu ahaa Gudoomiyihii hore ee degmadda Ufayn oo katirsan gobolka Bari, waxaa la dilay bishii May 14 2011 waxaana lagu dilay magaaladda bosaaso, dilkiisana waxaa gaystay kooxo afka soo duubtay.
16. Ganacsadde Maxamed Cumar Gurey : Wuxuu kamid ahaa ganacsatadda gobolka mudug, waxaana la dilay bishii April 27 2011 waxaana lagu dilay magaaladda gaalkacyo.
17. Ganacsadde Cabdisalaan Warsame Aw Maxamuud : Wuxuu kamid ahaa Ganacsatadda gobolka bari, waxaana la dilay bishii May 14 2011 waxaana lagu dilay magaaladda bosaaso.
18. Ganacsadde Cabdinuur Saalax Dhiidhax : Wuxuu kamid ahaa ganacsatadda gobolka bari, waxaana la dilay bishii May 16 2011 waxaana lagu dilay magaaladda bosaaso.
19. Ganacsade Cumar Aw Muuse Maxamed : Marxuumkani wuxuu kamid ahaa Ganacsatada Waa Weyn ee gobolka bari iyo waliba Mas’uuliyiinta Shirkadda Red Sea ee Xarunteedu tahay Magaaladda Bosaaso, waxaana la dilay Bishii June 20 2011 waxaana lagu dilay magaaladda bosaaso.
1. Suldaan Ciise Xasan Cumar : Wuxuu kamid ahaa salaadiinta waaweyn ee Reer Puntland si aad ahna looga yaqaan gobolka bari, suldaan ciise wuxuu habeen iyo maalin kala hadli jiray bulshadda kana wacyi galin jiray khataraha dhanka amniga iyo dhibaatadda burcad badeeda, suldaanka waxaa la dilay bishii November 21 2010 waxaana lagu dilay magaaladda bosaaso xili uu kasoo baxay salaadii maqrib oo uu kutu kaday masjidka aqsaa ee magaaladda bosaaso, dilkiisana waxaa gaystay laba nin oo afka soo duubtay.
2. Xildhibaan Maxamed Cabdi Jibriil (Daqarre) : Wuxuu kamid ahaa Xildhibaanadda Baarlamaanka Puntland, waxaana la dilay bishii January 19 2010 waxaana lagu dilay magaaladda bosaaso, dilka xildhibaankana waxaa gaystay kooxo afka duubtay.
3. Xildhibaan Cabdullaahi Cali Kaarad : Wuxuu ahaa Xildhibaan kamida Golaha Baarlamaanka Puntland, waxaana la dilay bishii January 5 2010, waxaana lagu dilay magaaladda bosaaso.
4. Xeer i laaliye Cali Jaamac Qalas : Wuxuu ahaa Xeer i laaliye kuxigeenka maxkamadda darajadda 1aad ee bosaaso, ahaana sii haya xilka gudoomiyaha maxkamadda sare, waxaana la dilay bishii June 12 2010 waxana lagu dilay magaaladda bosaaso xili uu kasoo baxay shaqadiisa, dilkiisana waxaa gaystay kooxo afka soo duubtay.
5. Xeer i laaliye Col. Cabdullaahi Saalax Shirwac : Wuxuu ahaa xeer i laaliyaha maxkamadda sare ee gobolka bari, sidoo kale wuxuu ahaa Taliye Kuxigeenka Akadeemiyadda Tababarka Ciidamada ee Carmo, waxaana la dilay bishii November 30 2010 waxaana lagu dilay magaaladda bosaaso, dilkiisana waxaa gaystay kooxo afka duubtay.
* 6. Taliye G/sare Warsame Yusuf Axmed (Yeey) : Wuxuu ahaa Taliyihii Ciidanka Dambi Baarista (CID) ee Qaybta Gobolka Mudug, sidoo kale wuxuu kamid ahaa Saraakiisha Sare ee Booliska Gobolka Mudug, waxaa la dilay bishii December 1 2010, waxaana lagu dilay magaaladda gaalkacyo (* Cafwan – Warsame waa uu ka badbaaday isku dayga dil, walow uu soo gaaray dhaawac aad u xumi).
7. Taliye G/sare Xuseen Cali Faarax : Wuxuu ahaa Taliyihii Saldhigga Baalale ee Magaaladda Bosaaso, waxaana la dilay bishii December 10 2010, waxaana lagu dilay magaaladda bosaaso.
8. Taliye G/sare Axmed Xasan Xaaji (Dhoonge) : Wuxuu ahaa Taliyihii Saldhiga Biyo Kulule ee Magaaladda Bosaaso, waxaana la dilay bishii September 5 2010, waxaana lagu dilay magaaladda bosaaso.
9. Taliye G/sare Axmed Jaamac Saalax (Ratey) : Wuxuu kamid ahaa Saraakiisha Booliska Puntland, Horayna wuxuu mar usoo noqday Taliya Saldhiga Dhexe Magaaladda Garoowe, waxaana la dilay bishii December 2 2010, waxaana lagu dilay Degmadda Buurtinle oo katirsan Gobolka Nugaal, dilkiisana waxaa gaystay kooxo dablay ah oo hubaysan.
10. Gudoomiye Cabdullaahi Mahdi Xasan (Sayidka) : Wuxuu ahaa Gudoomiyaha Uruka Iskuxirka Ardayda Soomaaliyeed, waxaana la dilay bishii January 31 2010 waxaana lagu dilay magaaladda bosaaso.
1. Nabadoon Cabdi Kacaan : Wuxuu kamid ahaa nabadoonadda gobolka mudug had iyo jeerna ka shaqayn jiray wacyi galinta bulshadda ee dhanka amnigga. nabadoon cabdi kacaan waxaa la dilay bishii February 6 2009 waxaana lagu dilay magaaladda gaalkacyo, iyadoo dilkiisa ay gaysteen kooxo afka soo duubtay.
2. Wasiir Warsame Cabdi Shirwac (Seefta-Banaanka) : Wuxuu ahaa wasiirkii warfaafinta dowladda puntland sidoo kale wuxuu ahaa ruug cadaa siyaasi ah oo kasoo qayb qaatay asaaskii dowladda puntland sanadkii 1998, wuxuuna xilal kala duwan oo wasiirnimo ka soo qabtay dhammaan xukuumadihii puntland soo maray marka laga reebo xukuumadii Madaxweyne Gen Maxamuud Muuse Xirsi (Cadde), Geeridiisuna waxay raad ku reebtay oo dhammaanba tabay shacabweynaha puntland iyo waliba xukuumadii uu katirsanaa markaas, Marxuum Seefta Banaanka waxaa la dilay bishii Augosto 5 2009 waxaana lagu dilay magaaladda gaalkacyo, dilkiisana waxaa gaystay kooxo ah dablay oo hubaysan.
3. Xildhibaan / Qareen Ibaraahim Cilmi Warsame (Gaab) : Wuxuu ahaa Xildhibaan ka tirsan Golaha Baarlamaanka Puntland sidoo kale waxuu ahaa Qareen u dooda xuquuqda aadanaha sidoo kale wuxuu xubin ka ahaa gudigga xiriirka golayaasha, waxaana la dilay bishii November 11 2009 waxaana lagu dilay magaaladda Garoowe dilka xildhibaankana waxaa gaystay kooxo afka soo duubtay.
4. Gudoomiye Yaasin Siciid Xuseen : Wuxuu ahaa Gudoomiyihii Gobolka Karkaar sidoo kalena waxuu ahaa Mas’uul si weyn uga shaqayn jiray howlaha Amnigga iyo Hormarka Gobolka Karkaar, Gudoomiye Yaasin waxaa la dilay Bishii APril 27 2009 waxaana lagu dilay Degaanka Dhudub oo Katirsan gobolka karkaar, xili uu halkaas ku tagay shaqo howleed.
5. Taliye G/sare Yaasin Axmed Sanweyne (Tolwaayey) : Wuxuu ahaa Taliyihii Ciidanka Sirdoonka Puntland (PIS) Qaybta Gobolka Mudug, waxaana la dilay bishii Aprill 29 2009 waxaana lagu dilay magaaladda gaalkacyo, ayadoo dilkiisana loo adeegsaday Qarax Banbaano oo lala beegsaday gaarigii uu saarnaa Taliyuhu.
6. Sarkaal Cismaan Cabdidaahir Maxamuud (Coor-Coor) : Wuxuu kamid ahaa Saraakiisha Dowladda Puntland ee Gobolka Mudug, iyo waliba odayaasha magaaladda had iyo jeer ka hadla arrimaha ammaanka, waxaana la dilay bishii December 12 2009 waxaana lagu dilay magaaladda gaalkacyo.
1. Nabadoon Cabdirisaaq Maxamuud Guhaad : Wuxuu kamid ahaa nabadoonadda gobolka mudug si firfircoona uga qayb qaadan jiray howlaha ammnigga gobolka, nabadoon cabdirisaaq guhaad waxaa la dilay bishii june 23 2008 waxaana lagu dilay magaaladda gaalkacyo, waxaana dilkiisa loo adeegsaday miino loo hoos dhigay gaarigiisa aakhirkiina wuu ku geeriyooday.
2. Nabadoon Yaasin Cali Barre (Fitilig) : Wuxuu kamid ahaa nabadoonadda gobolka mudug si aad ahna had iyo jeer uga hadli jiray howlaha amnigga gobolka, nabadoon yaasin fitilig waxaa la dilay bishii june 30 2008 waxaana lagu dilay magaaladda gaalkacyo xili uu ku sugnaa maqaaxi uu marxuumku lahaa, dilkiisana waxaa gaystay niman afka soo duubtay oo u adeegsaday baastoolad.
3. Ganacsadde Cali Jaamac Biixi (Janno-Galle) : Wuxuu kamid ahaa Ganacsatadda gobolka mudug iyo waliba odayaasha gobolka, wuxuu kaloo cali biixi mar ahaa Madaxii Shirkadda Biyaha ee Magaaladda Gaalkacyo, wuxuuna inta badan ganacsadde cali biixi ka hadli jiray ammaanka magaaladda gaalkacyo wuxuuna ahaa tiirarka muhiimka u ah hormarka magaaladda gaalkacyo aadna looga yaqaanay marxuumka, cali biixi waxaa la dilay bishii july 9 2008 waxaana lagu dilay magaaladda gaalkacyo xili uu kasoo baxay salaadii subax, dilkiisana waxaa gaystay koox afka soo duubatay.
4. Ganacsadde Maxamuud Shiikh Cismaan : Wuxuu kamid ahaa ganacsatadda gobolka mudug waliba ku wooda ku leh miisaanka sidoo kale wuxuu kamid ahaa Guddigga Nabad Galyadda Magaaladda Gaalkacyo, ganacsadde maxamuud shiikh waxaa la dilay bishii October 8 2008, waxaana lagu dilay magaaladda gaalkacyo xili uu kasoo baxay masjidka al towba, dilkiisana waxaa gaystay kooxo afka soo duubtay.
5. Ganacsadde Xasan Axmed Cali Xasan (Yare) : Wuxuu kamid ahaa ganacsatadda gobolka mudug, waxaana la dilay bishii June 11 2008 waxaana lagu dilay magaaladda gaalkacyo.
Puntland oo dayactir ku samaysay maddaarrada waawayn ee Boosaaso, Gaalkacyo iyo Garoowe.